၂၀၁၉၊ ဒီဇငျဘာလမှာ ကမ်ဘာမွကေို စတငျခွခေခြဲ့တဲ့ ကိုဗဈရောဂါဆိုးကွီးက အခုအခြိနျအထိ ပြောကျကှယျ မသှားသေးဘဲ လူသားတှရေဲ့ အသကျကို ပြျောပြျောကွီး ခွှယေူနဆေဲ၊ နိုငျငံအသီးသီးရဲ့ လူမှုရေး၊ ကနျြးမာရေး၊ စီးပှားရေးတှကေို အခကျအခဲ၊ အကပျြအတညျးတှဖွေဈအောငျ ဖနျတီးနဆေဲပါပဲ။ ကိုဗဈကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့တှေ ဘယျမှမသှားရဲမလာရဲအောငျ ခွခြေုပျမိနတေယျ၊ ကိုယျခဈြခငျရတဲ့သူတှနေဲ့လညျး အကွာကွီးခှဲခှာနရေတယျ။
နောကျဆုံး ဒီရောဂါကွောငျ့ ကိုယျနဲ့ ခငျမငျရငျးနှီးသူတဈယောကျ လောကကွီးထဲကနေ မမြှျောလငျ့ဘဲ ထှကျခှာသှားရငျတောငျ နောကျဆုံးခရီးကို နှုတျဆကျခှငျ့ မရတဲ့ဘဝမြိုး။ ဒီလိုအဖွဈဆိုးတှေ ဘယျတော့မြားမှ အဆုံးသတျနိုငျမှာလဲ။ အခုလညျး လီဗာပူးလျနညျးပွ ယာဂနျကလော့ပျရဲ့ ရငျထဲမှာ ဘယျလိုမှဖွသေိမျ့နိုငျမှာမဟုတျတဲ့ အပူမီးတှေ လောငျမွိုကျနပေါလိမျ့မယျ။
မိခငျဖွဈသူရဲ့ နောကျဆုံးဈာပနခရီးကို လိုကျမပို့နိုငျတဲ့ သားတဈယောကျရဲ့ ခံစားခကျြက ဘယျလိုမြိုးဆိုတာကို ပွောပွဖို့ အခုအခြိနျမှာ ယာဂနျကလော့ပျအတှကျ စကားလုံးတှေ ပြောကျဆုံးနပေါလိမျ့မယျ။ လူတဈယောကျရဲ့ ဘဝမှာ အဖဆေိုတာ အလငျးရောငျပေးတဲ့ နတေဈစငျးဆိုရငျ၊ အမကေ အေးခမျြးမှုတှေ ယူဆောငျပေးတဲ့ လတဈစငျးပါပဲ။
၂၀၀၀ ခုနှဈမှာ ယာဂနျကလော့ပျဘဝရဲ့ နတေဈစငျးဖွဈတဲ့ ဖခငျဖွဈသူ ကှယျလှနျသှားတဲ့နောကျမှာတော့ အမဖွေဈတဲ့ အဲလိဇဘတျဟာ ယာဂနျအတှကျ ကမ်ဘာပျေါမှာ အခဈြရဆုံးသူတဈဦးဖွဈလာခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ သခွေငျးတရားဆိုတာ လူတဈဦး စတငျမှေးဖှားလာခြိနျကတညျးက တဈခြိနျခြိနျကရြငျ မလှဲမသှကွေုံရမယျဆိုတဲ့အတိုငျးပဲ အခုတော့ အဲလိဇဘတျဟာ အသကျ(၈၁)နှဈအရှယျမှာ လူ့လောကထဲကနေ ထှကျခှာသှားခဲ့ရပွနျပါပွီ။
ယာဂနျအတှကျ ဖွမေဆညျနိုငျတာကတော့ မိခငျရဲ့နောကျဆုံးဈာပနခရီးကို ကိုယျတိုငျလိုကျမပို့နိုငျတာပါပဲ။ ဂြာမနီနိုငျငံမှာ ကိုဗဈရောဂါဆိုးကွောငျ့ ပွညျပကလာမယျ့သူတှကေို နိုငျငံအတှငျးဝငျရောကျခှငျ့ ပိတျပငျထားတာကွောငျ့ ယာဂနျအတှကျကတော့ ဝမျးနညျးစှာနဲ့ ငိုကွှေးနရေုံကလှဲလို့ ဘာမှမတတျနိုငျခဲ့ပါဘူး။
“အမကေ ကြှနျတေျာ့ဘဝအတှကျ အရေးပါဆုံးလူတဈယောကျပါ။ အမဆေိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ထိုကျတနျအောငျ နထေိုငျသှားခဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာတော့ အမဟော ဒီထကျပိုကောငျးတဲ့နရောတဈခုကို ရောကျသှားပွီလို့ထငျပါတယျ။ ကြှနျတျောကတော့ အခုလို ကပျဆိုးကွီးကရြောကျနတေဲ့အခြိနျမှာ အမရေဲ့နောကျဆုံးခရီးကိုတောငျ လိုကျမပို့နိုငျခဲ့ပါဘူး”။
လီဗာပူးလျအသငျးက ယာဂနျရဲ့ဝမျးနညျးမှုတှကေို မြှဝခေံစားတဲ့အနနေဲ့ “You’ll Never Walk Alone. Jurgen” ဆိုပွီး Twitter မှာ စာရေးသား အားပေးခဲ့တယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈတုနျးက မိခငျဖွဈသူရဲ့ အသကျ(၈၀)ပွညျ့မှေးနကေို့ အတူတကှဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ ယာဂနျဟာ ဒီနှဈမှာတော့ ဝမျးနညျးကွကှေဲစရာ အမှတျတရတှကေို ပွနျတှေးရငျးနဲ့ပဲ ကြျောဖွတျရတော့မှာပါ။
သားဖွဈသူရဲ့ အောငျမွငျမှုတှကေို အဝေးတဈနရောကနေ ကွညျနူးဂုဏျယူမှုအပွညျ့နဲ့ စောငျ့ကွညျ့ခဲ့တဲ့ အဲလိဇဘတျဟာ အခုအခြိနျမှာလညျး ကောငျးကငျဘုံကနေ ယာဂနျကို စောငျ့ကွညျ့အားပေးနဦေးမလားဆိုတာကတော့ . . . .
အမေဆိုတဲ့ ‘လ’တစ်စင်း ယာဂန်ကလော့ပ်ရဲ့ ကောင်းကင်မှာ ကွယ်ပျောက်သွားချိန်
၂၀၁၉၊ ဒီဇင်ဘာလမှာ ကမ္ဘာမြေကို စတင်ခြေချခဲ့တဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါဆိုးကြီးက အခုအချိန်အထိ ပျောက်ကွယ် မသွားသေးဘဲ လူသားတွေရဲ့ အသက်ကို ပျော်ပျော်ကြီး ခြွေယူနေဆဲ၊ နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးတွေကို အခက်အခဲ၊ အကျပ်အတည်းတွေဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေဆဲပါပဲ။ ကိုဗစ်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်မှမသွားရဲမလာရဲအောင် ခြေချုပ်မိနေတယ်၊ ကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေနဲ့လည်း အကြာကြီးခွဲခွာနေရတယ်၊ နောက်ဆုံး ဒီရောဂါကြောင့် ကိုယ်နဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးသူတစ်ယောက် လောကကြီးထဲကနေ မမျှော်လင့်ဘဲ ထွက်ခွာသွားရင်တောင် နောက်ဆုံးခရီးကို နှုတ်ဆက်ခွင့် မရတဲ့ဘဝမျိုး။ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေ ဘယ်တော့များမှ အဆုံးသတ်နိုင်မှာလဲ။ အခုလည်း လီဗာပူးလ်နည်းပြ ယာဂန်ကလော့ပ်ရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှဖြေသိမ့်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့ အပူမီးတွေ လောင်မြိုက်နေပါလိမ့်မယ်။ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ နောက်ဆုံးဈာပနခရီးကို လိုက်မပို့နိုင်တဲ့ သားတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်က ဘယ်လိုမျိုးဆိုတာကို ပြောပြဖို့ အခုအချိန်မှာ ယာဂန်ကလော့ပ်အတွက် စကားလုံးတွေ ပျောက်ဆုံးနေပါလိမ့်မယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝမှာ အဖေဆိုတာ အလင်းရောင်ပေးတဲ့ နေတစ်စင်းဆိုရင်၊ အမေက အေးချမ်းမှုတွေ ယူဆောင်ပေးတဲ့ လတစ်စင်းပါပဲ။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာ ယာဂန်ကလော့ပ်ဘဝရဲ့ နေတစ်စင်းဖြစ်တဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ကွယ်လွန်သွားတဲ့နောက်မှာတော့ အမေဖြစ်တဲ့ အဲလိဇဘတ်ဟာ ယာဂန်အတွက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချစ်ရဆုံးသူတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သေခြင်းတရားဆိုတာ လူတစ်ဦး စတင်မွေးဖွားလာချိန်ကတည်းက တစ်ချိန်ချိန်ကျရင် မလွဲမသွေကြုံရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ အခုတော့ အဲလိဇဘတ်ဟာ အသက်(၈၁)နှစ်အရွယ်မှာ လူ့လောကထဲကနေ ထွက်ခွာသွားခဲ့ရပြန်ပါပြီ။ ယာဂန်အတွက် ဖြေမဆည်နိုင်တာကတော့ မိခင်ရဲ့နောက်ဆုံးဈာပနခရီးကို ကိုယ်တိုင်လိုက်မပို့နိုင်တာပါပဲ။ ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ရောဂါဆိုးကြောင့် ပြည်ပကလာမယ့်သူတွေကို နိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားတာကြောင့် ယာဂန်အတွက်ကတော့ ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ငိုကြွေးနေရုံကလွဲလို့ ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
“အမေက ကျွန်တော့်ဘဝအတွက် အရေးပါဆုံးလူတစ်ယောက်ပါ။ အမေဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ထိုက်တန်အောင် နေထိုင်သွားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ အမေဟာ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကို ရောက်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အခုလို ကပ်ဆိုးကြီးကျရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ အမေ့ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုတောင် လိုက်မပို့နိုင်ခဲ့ပါဘူး”။ လီဗာပူးလ်အသင်းက ယာဂန်ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေကို မျှဝေခံစားတဲ့အနေနဲ့ “You’ll Never Walk Alone. Jurgen” ဆိုပြီး Twitter မှာ စာရေးသား အားပေးခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ အသက်(၈၀)ပြည့်မွေးနေ့ကို အတူတကွဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ယာဂန်ဟာ ဒီနှစ်မှာတော့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာ အမှတ်တရတွေကို ပြန်တွေးရင်းနဲ့ပဲ ကျော်ဖြတ်ရတော့မှာပါ။ သားဖြစ်သူရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို အဝေးတစ်နေရာကနေ ကြည်နူးဂုဏ်ယူမှုအပြည့်နဲ့ စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ အဲလိဇဘတ်ဟာ အခုအချိန်မှာလည်း ကောင်းကင်ဘုံကနေ ယာဂန်ကို စောင့်ကြည့်အားပေးနေဦးမလားဆိုတာကတော့ . . . .